Takapedzerana na Eddie pa Lodge – Vanoda Zvinhu
Takapedzerana na Eddie pa Lodge
Tainge tabooker room pakafancy lodge, takapotsa tabvarura hembe nenyere yatainge tinayo.
Ndakamumbundira iye akachindibata magaro takarara pabed. My hair was a tangled mess, as he had run his hands through it so many times, I had lost count. Mboro yake yainge yakamira ichindiguma guma pabeche rangu zvaiita kuti ndinzwe kuda kusvirwa more and more.Ndakachemerera ndichimuudza kuti asamire, akandibvisa brraaa nemazino ake mazamu angu akabva atanga kurembera pasi akanditarisa ndikabva ndatanga kunyarira. Akanditi usanyare hako you are beautiful plus you have the most beautiful boby anybody could ask for.” Akatanga kutamba neminyatso yangu apa rimwe ruoko ruchibatabata magaro angu, ndakabva ndadhonza shirt yake ndichida kutamba nesix pack yake. Haana kana kumira kunanzva minyatso yako ndaibva ndanzwa ropa kumhanya muviri wese ndichibva ndanzwa kuda kuramba ndichibatwa.
Paaidya minyatso yangu akabva atanga akudzika achienda paguvu ndikanzwa mazamu angu awoma kuita kunge azara mukaka.My impatience got the best of me ndikabva ndabvisa majeans angu ndikakanda uko, ndakatanga kumubabata bata muviri wese ndichi avoider kubata mboro yake. Akabva aita kubvarura pant rangu apa ndainge ndaita kutota kunge munhu agarira mvura. He flipped me akabva andifongoresa and I didn’t expect it, I was facing the bed face down achibva aisa musoro wake pakati pemakumbo angu akatanga kudya beche achinyatsonyudza rurimi rwake mukatikati.
Ndakanzwa munhu akafemereka kunge munhu abva kumhanyiswa nembwa the whispered my name “Nomsa” ndisati ndadaira akabva andivhara muromo ne a deep kiss. Ndaenda pasi pake ndokubata mboro yake apa kunyarira kwainge kwapera and I took control ndikabva ndamubvisa his boxers ndikaisa mboro mukanwa and played with it, ndakaibvisa mukanwa ndikatanga kuibonyora zviri fast reruoko. Akabva andisimudza akandiisa pabed akavhura makumbo angu akatanga kundinanzva muzvidya slowly working his way up. Maziso angu akaita kunge achabuda as this was the most instense pleasure I have ever felt in my life. Akatanga kuisa rurimi rwake mukati mebeche apa juice dzainge dzakuyerera apo ndainge ndakuchemerera zvekutoita noise, aiti achinanzva beche atora zvigunwe zvake achindikoirira nazvo.Ndainge ndakusagona kana kutaura all I could say was ” Ohhh Adam” . Akaisa musoro pakati pemakumbo again kuti anyatsonanzva juice yese yaibuda mubeche rangu.
Akabva atora ruoko rwangu akandibatisa kabeans kangu akati “rub” ndainge ndatova confused and I started to rub slowly kusvikira ndatonzwa kuti ndakatota stereki, juice yakanga yazara pazvigunwe zvangu Adam ndokuinanzva yese.Mboro yake yainge yamira kuita kunge simbi ichindibaya baya padumbu ndokubva akuiteaser achiti urikuda kusvirwa here. Aibvunza izvi achiiisa pamuromo webeche ini ndainge ndanzwa nezemo ndikati I want you so bad ndisvirewo kani. Akatanga kundisvira hard zvekuti handina kutora nguva kutunda akambomira ndapedza kutunda ndikafunga kuti pamwe aneta asi akasimudza makumbo angu zvakare akatanga kuita mahard strokes achirova chibereko changu kusvikira Adam atundawo tsaaaa tsaaa tsaaaa. Akambosiya mboro irimo mubeche for a few minutes as we both regained our strength to wake up.
Kusvira mukaradhi anhuwoye
· Last modified August 25, 2015 0
Next story Aigara achida zvekukwira, saka ndakazomugadzirira size tiri mubath yepaAirport
Previous story Kurohwa ne Nyoro na Joe taenda kulake